Maqaaleen Calc keessaa qubeelee,lakkoofsotaa, fi arfiilee addaa qabachuu danda'a.Maqaaleen arfiin ykn jalmuraan jalqabuu qabu.
Arfiilee addaa eeyyamaman
tuqaa (.)-maqaa keessatti ni eeyyamama, garuu akka qubee jalqabaa ykn dhumaa hin ta'u
duwwaa ( )-maqaa keessatti ni eeyyamama, garuu akka qubee jalqabaa ykn dhumaa hin ta'u, akkasumas hammangaa man'eef hin ta'u
Maqaaleen akka qabii man'eetti tokko ta'uu hin qaban.Fakkeenyaaf,maqaan A1 sirrii miti sababni isaas A1 wabii man'ee gubbaa bitaa ti.
Maqaaleen hammangaawwan man'ee bakka duwwaa qabaachuu hin qaban.Bakki duwwaa kan eeyyamamu maqaalee man'eewwan,wardiilee fi galmeelee baaqqee keessatti dha.
Maadheelee fi foormulaa moggaasuu
Karaan man'eelee fi hammangaa man'eee foormulaa keessa jiru wabeeffachuu gaariin maqaalee hammangaawwanii kennuu dha.Fakkenyaaf,hammangaa A1:B2 Jalqaba jettee moggaasuu dandeessa.Achiin foormulaa kan akka "=SUM(Jalqaba)" barreessuu dandessa.Erga tarreewwan ykn sarjaawwan saagdee yookiin haqxee boodayyuu,LibreOffice ammayyuu hammangaawwan maqaan addaan bahan sirriidhaan ramada.Maqaaleen hammangaa iddoolee qabaachuu hin qaban.
Fakkeenyaaf,foormulaa ashuuraa gurgurtaa dubbisuun yoo "= Amount * Tax_rate" barreessuu dandeesse,"= A5 * B12" irra baay'ee salphaa dha.
Maqaalee formulaawwan yookiin qaamolee foormulaawwanii kan yeroo baay'ee barbaadamaniif qindeessuuf qaaqa Maqaalee qindeessuufayyadami.Maqaalee hammangaa qindeessuuf,
Maqaa bal'ina filatamee dirree Maqaa keessatti barreessi.Dabali cuqaasi.Maqaan haaraa qindaa'e tarree armaan gadii keessatti mul'ata.Qaaqa cufuuf TOLE cuqaasi.
Hammangaawwan maadhee biroos qaaqa kana keessatti maqaa dirree keesatti galchuudhaan moggaasuu fi achiin maadheelee isaanii filachuu dandeessa.
Yoo maqaa foormulaa keessatti barreessite,erga qubeen muraasni barreeffamee maqaa guutuu akka qajeelchaatti argita.
Maqaa qajeelcha irraa fudhachuuf furtuu Enter tuqi.
Babrbaacha Kaayyoo Raawwadhu
Teessoowwanii fi Wabiilee, Of danda'aa fi Hirkataa
Title is: Maadheelee moggaasuu